Android အရသာကို အပြည့်အ၀ခံစားနိုင်စေမယ့် Mi A2 မကြာခင်ထွက်ရှိလာမည် – ရှအေလငျး
MOBILE • Review
Android အရသာကို အပြည့်အ၀ခံစားနိုင်စေမယ့် Mi A2 မကြာခင်ထွက်ရှိလာမည်
ဈေးကွက်ထဲကို မကြာခင်အချိန်တုန်းက Mi 6X ဖုန်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Mi A2 ဖုန်းကလည်း ဈေးကွက်ထဲကိုမကြာခင်ဝင်ရောက်လာတော့မှာပါ။ Mi A1 တုန်းကလိုပဲ Mi A2 အနေနဲ့လည်းမြန်မာပြည်ဈေးကွက်မှာ မင်းမှုနိုင်အုံးမလားဆိုတာကို တစ်ချက်လောက်စောင့်ကြည့်ရအောင်…။
Androidအရသာဆိုတာဘာလဲ…။ Mi A2 မှာပါဝင်လာမဲ့ Android စစ်စစ်ဆိုတာရောဘာလဲ? တရုတ်ပြည်အခြေစိုက် Xiaomi ကုမ္ပဏီဟာသုံးစွဲသူတွေကို စိတ်ကျေနပ်မှုအပေးနိုင်ဆုံးနေရာတစ်ခုပါပဲ။ Mi A1 တုန်းကလည်း Pure android နဲ့ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ သူမှာတော့ တခြားသော Ui တွေမပါဝင်ပဲ Android Ui တစ်ခုထဲသာပါဝင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Miui ကိုမကြိုက်ပဲ Android စနစ်ပဲပါဝင်ပြီး ရိုးရှင်းတဲ့အရသာကိုပေးစွမ်းနိုင်တာကတော့ Mi A1, Mi A2 စမတ်ဖုန်းတွေပါပဲ။ ဒါ့အပြင်သူတို့ဟာ Update တိုင်းကိုလည်း လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ရအုံးမှာပါ။ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးထူးခြားတဲ့ အထိအတွေ့ကို ခံစားတတ်မယ်ဆိုရင် Mi A2 ကိုမဖြစ်မနေရွေးးချယ်သင့်ပါတယ်။ သြဂုတ်လအတွင်းမှာ ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သူရဲ့ အချက်အလက်တွေကတော့ မျက်နာပြင် ၅.၉၉ လက်မ ၁၈း၉ အချိုးနဲ့လာမှာပါ။ Snapdragon 660 ၊ ကင်မရာအနေနဲ့ 12+20 Mp Dual camera၊ ဘက်ထရီကတော့ 3010 mah နဲ့လာမှာပါ။ ဈေးကတော့ဒေါ်လာ ၂၉၀နဲ့ ၃၅၀ ကြားရှိမှာပါ။
Mi ဖုန်းတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည် Hamdware ကိုတော့ကြိုက်တယ်။ Miui စနစ်ကိုတော့ ဘ၀င်မကျဘူး။ အဆိုပါလူတွေအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ခံစားမှုကို ထိတွေ့နိုင်ဖို့ Mi A2 ကအသင့်ရှိနေပါတယ်။
Nanda Myint Ko (နည်းပညာချစ်သူ)
ဈေးကှကျထဲကို မကွာခငျအခြိနျတုနျးက Mi 6X ဖုနျးဝငျလာခဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Mi A2 ဖုနျးကလညျး ဈေးကှကျထဲကိုမကွာခငျဝငျရောကျလာတော့မှာပါ။ Mi A1 တုနျးကလိုပဲ Mi A2 အနနေဲ့လညျးမွနျမာပွညျဈေးကှကျမှာ မငျးမှုနိုငျအုံးမလားဆိုတာကို တဈခကျြလောကျစောငျ့ကွညျ့ရအောငျ…။
Androidအရသာဆိုတာဘာလဲ…။ Mi A2 မှာပါဝငျလာမဲ့ Android စဈစဈဆိုတာရောဘာလဲ? တရုတျပွညျအခွစေိုကျ Xiaomi ကုမ်ပဏီဟာသုံးစှဲသူတှကေို စိတျကနြေပျမှုအပေးနိုငျဆုံးနရောတဈခုပါပဲ။ Mi A1 တုနျးကလညျး Pure android နဲ့ထုတျဝခေဲ့ပါတယျ။ သူမှာတော့ တခွားသော Ui တှမေပါဝငျပဲ Android Ui တဈခုထဲသာပါဝငျတာလညျးဖွဈပါတယျ။ Miui ကိုမကွိုကျပဲ Android စနဈပဲပါဝငျပွီး ရိုးရှငျးတဲ့အရသာကိုပေးစှမျးနိုငျတာကတော့ Mi A1, Mi A2 စမတျဖုနျးတှပေါပဲ။ ဒါ့အပွငျသူတို့ဟာ Update တိုငျးကိုလညျး လငျြလငျြမွနျမွနျနဲ့ရအုံးမှာပါ။ ရိုးရှငျးလှယျကူပွီးထူးခွားတဲ့ အထိအတှကေို့ ခံစားတတျမယျဆိုရငျ Mi A2 ကိုမဖွဈမနရှေေးးခယျြသငျ့ပါတယျ။ သွဂုတျလအတှငျးမှာ ရောငျးခသြှားမှာဖွဈပါတယျ။
သူရဲ့ အခကျြအလကျတှကေတော့ မကျြနာပွငျ ၅.၉၉ လကျမ ၁၈း၉ အခြိုးနဲ့လာမှာပါ။ Snapdragon 660 ၊ ကငျမရာအနနေဲ့ 12+20 Mp Dual camera၊ ဘကျထရီကတော့ 3010 mah နဲ့လာမှာပါ။ ဈေးကတော့ဒျေါလာ ၂၉၀နဲ့ ၃၅၀ ကွားရှိမှာပါ။
Mi ဖုနျးတှရေဲ့စှမျးဆောငျရညျ Hamdware ကိုတော့ကွိုကျတယျ။ Miui စနဈကိုတော့ ဘဝငျမကဘြူး။ အဆိုပါလူတှအေတှကျရိုးရှငျးတဲ့ခံစားမှုကို ထိတှနေို့ငျဖို့ Mi A2 ကအသငျ့ရှိနပေါတယျ။
Nanda Myint Ko (နညျးပညာခဈြသူ)
ဖုန်းပိုင်ရှင်ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို တခြားသူဆီ အလိုအလျှောက် ပို့နေတဲ့ Samsung Phone များ
ကင်မရာအကြီးစား 40MP နဲ့ အတူ ကင်မရာသုံးလုံး အသုံးပြုမယ့် Huawei P20 Pro
Window 10 October Update မှာ ဘာFeature အသဈတှေ ပါဝငျလာသလဲ။
မူးယဈဆေးမှုနဲ့ မှားယှငျးစှပျစှဲ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခံထားရတဲ့ ဖွိုးပွညျ့စုံ လှတျမွောကျ
မူးယဈဆေးမဟုတျလို့ ပွနျလှတျလိုကျတာလို့ ဗဟနျးရဲစခနျးမှ ရဲမှူးပွော
မူးယဈဆေးမှုနဲ့ မှားယှငျးစှပျစှဲ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခံထားရတဲ့ အဆိုတျောဖွိုးပွညျ့စုံ လှတျမွောကျပွီ
ဂျပန်နိုင်ငံကို ၂၅ နှစ်အတွင်း အဆိုးဝါးဆုံး တိုင်ဖွန်း မုန်တိုင်း Typhoon...
ပြီးစီးလုနီးပြီဖြစ်တဲ့ အစ္စရေးရဲ့ ပင်လယ်တံတိုင်း
ထိုင်းလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုးရီးယားတွေရဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုခံနေရတဲ့...
Samsung Galaxy S9 နှင့် S9 Plus ကို ဖုန်းအဟောင်းများနှင့် လဲလှယ်ဝယ်ယူနိုင်
ကားကြိတ်ခံပြီးသေခဲ့ရတဲ့ မောင်ထိန်လင်းအောင် ကားပေါ်လိုက်လာပြီး ကားသမားကို...
ဆရာတော်က အရှင်ဆန္ဒာဓိက ကမေးတယ် “ဒကာကြီးနေတိုး ငိုပြီးသွားပလား” တဲ့...
ပရိသတ်တွေနားထောင်ပြီး မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ နေတိုး သီဆိုထားတဲ့ သီချင်း
ရေခဲတိုက်မှ ထုတ်ယူလာသော အလောင်းကို ပိုင်ရှင်အိမ်သို့ ပို့လိုက်သောအခါ
မူးယဈဆေးမှုနဲ့ မှားယှငျးစှပျစှဲ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခံထားရတဲ့ ဖွိုးပွညျ့စုံ...
မူးယဈဆေးမှုနဲ့ မှားယှငျးစှပျစှဲ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခံထားရတဲ့...